I-bamboo Cutlery, i-Cpla Utensil, iCutlery Combo Set-Gianty
SIYAKUTHANDA ukhetho lwakho oluhle
IGianty ngumvelisi ohlanganiswe ngokupheleleyo noyilo lwangaphakathi, uphuhliso lomzekelo, kunye nemveliso yemveliso. Inkampani yakha iqela le-R & D elite elite elineengcali zobuchwephesha ezigxininisa kubuchwephesha bobuchule, uphando lwe-bioplastics, kunye nophuhliso lweprototype. Iqela le-R & D liqhuba kwaye lisebenzise uphando lwenzululwazi ukuphucula iimveliso esele zikho kunye nokuvelisa iimveliso ezintsha ukuze kuxhamle abathengi. Amava ezorhwebo kunye nobungcali bokuncedisa ekwenzeni iimveliso ezilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno ezithile zentengiso.
NGELINYE IVANGELI LOKUGQIBELA LOKUTHENGA
Isicwangciso sokuSebenza se-EU seSetyhula soQoqobelo siphinda siguqise ukuqhutywa kwephakheji enobuhlobo be-eco-friendly
Ikhomishini yaseYurophu yamkele isiCwangciso seSetyhula sezoQoqo esitsha apho ibeka phambili ukunciphisa ukugcwala nokubeka inkunkuma, ukuqhuba kuyilo lokuphinda kubuye kuphindwe kubuyiswe kwaye kuncitshiswe nobunzima bezinto zokupakisha. Isicwangciso, esichazwa yiKhomishini njengenye ye ...
Uphononongo lweMiboniso yeGianty
Kunyaka ophelileyo, siye kwiCanton Fair, i-NRA eChicago nasePLMA eAmsterdam. Kwinyanga ephelileyo sivele nje saya kwi-HRC ukusukela nge-3 kaMatshi-5 - owona msitho mkhulu nongaziwayo e-UK. Umzi-mveliso wokutya wase-UK kunye nomoya wokubuk 'iindwendwe wamkelwa kwihlabathi liphela njengephambili ...
NGELINYE INDLELA YOKUGQIBELA YOLWAZI LOKUGQIBELA OLUFANELEKILEYO
I-CPLA eCwecwe ukuSusa iBhokisi yokuThengisa kunye neDispla ...